नेपालगञ्जमा वातावरणमैत्री अभियान सुरु
नेपालगञ्ज, २ भाद्र । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई वातावरणमैत्री बनाइने भएको छ । नेपालकै सबैभन्दा बढी गर्मी हुने शहरका रुपमा परिचित नेपालगञ्जमा विरुवा रोपेर हरियालीयुक्त स्वच्छ वातावरण बनाउने अभियान शुरु गरिएको छ ।
दाङको जिप्रका शनिबार पनि खुल्ने
दाङ, २ भाद्र । नागरिकलाई सहज तथा छिटोछरितो सेवा प्र्रदान गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ शनिबार पनि खुल्ला रहने जनाएको छ ।
प्रदेश २ का लागि विशेष प्याकेज ल्याइएको छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
धनुषा, २ भाद्र । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पाँच वर्षभित्र समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानलाई ध्यानमा राखेर सरकार अघि बढेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुल्ला पत्र : प्रदेश २ को प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्ने नैतिक आधार छैन
तपाईको जनकपुर आगमन र प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने खबर विभिन्न संचार माध्यमबाट अवगत भयो। प्रधानमन्त्रीको आगमन प्रदेशवासीको लागी हर्ष र उल्लासको विषय हुनुपर्थ्यो। त्यसमा पनि प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम त प्रदेशकै लागि अत्यन्त सुखद विषय त्यसमा पनि प्रदेश सभामा बसेर प्रदेश सभा
डा. सीके राउत गौर आउँदा व्यापक प्रहरी परिचालन
राकेश यादव, रौतहट, १ भाद्र । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा.सीके राउत बिहीबार मुद्दाको साक्षी बकपत्रका लागि रौतहट जिल्ला अदालत गौरमा हाजिर भएका थिए । नेपाल सरकार वादी भएको राज्य विरुद्धको संगठित अपराध मुद्दाको साक्षी वकपत्रका लागि डा. राउत
ह्विंगरले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको ज्यान गयो
रुपन्देही, १ भाद्र । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्र्तगत रुपन्देहीको सैनामैनामा ह्विंगर ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । आक्रोशित स्थानीयले ह्विंगर जलाएका छन् ।
छात्रवृत्ति कार्यक्रमले बालविवाहमा कमी
महोत्तरी, १ भाद्र । महोत्तरीमा बिहीबार ९९ जना छात्राहरुलाई विशेष लक्षित, अति जोखिम तथा रोल मोडल छात्रवृति वितरण गरिएको छ । नेपाल छात्रवृति कार्यक्रम परियोजना अन्तर्गत कक्षा १ देखि स्नातक तहमा अध्ययनरत दलित छात्राहरुलाई छात्रबृति दिइएको हो ।
‘प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन स्वीकार्य नहुने’
काठमाडौं, १ भाद्र । प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने आशंका बढेको, पेशागत समुहहरुले असुरक्षाको अनुभव गरेको, समावेशी र समानताका मुल्यहरुमाथि प्रहार हुन थालेको जस्ता घटनाहरुप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वतन्त्रताको पक्षमा सर्जकहरु सजग रहनुपर्ने नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीले बताएका छन् ।
संविधान प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सक्दैन : मुख्यमन्त्री राउत
वीरगन्ज, १ भाद्र । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो भन्नेले अहिले सङ्घीयतालाई असफल पार्न खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् ।